Xildhibaan ka baxay M oo ku biiray xisbiga Sverigedemokraterna - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Xildhibaan ka baxay M oo ku biiray xisbiga Sverigedemokraterna
La daabacay onsdag 17 maj kl 13.50
Patrick Reslow oo isa baxay xisbiga Modaraat-ka.
Patrick Reslow, oo shir jaraa'id ku sheegay inuu ku wareegay xisbiga SD. sawir: HENRIK MONTGOMERY / TT
Mid ka mid ah xil-dhibaannada xisbiga Moderaterna u metela xubnaha baarlamanka Patrick Reslow ayaa ku dhawaaqay inuu iska casilay xisbiga (M), isla-markaana codsi u gudbiyay xisbiga Sverigedemokraterna sidii uu xubin uga noqon lahaa, sida uu saaka shir jaraa’id ku soo bandhigay xarunta baarlamanka Sweden.
Patrick Reslow ayaa sanadkii 2010-kii waxaa loo doortey xubin baarlamaan oo ka tirsan xisbiga Modaraat-ka, wuxuuna sidoo kale xubin ka ahaa guddi hoosaadyada baarlamaanka dalkaan Sweden u qaabilsan arrimaha caddaalada iyo dastuurka.
Patrick Reslow ayaa isagoo sharxaya sababta uu uga tagey xisbiga Modaraatka, wuxuu yiri sidan soo socota:
- Muddo dheer ayey arrintaani soo socotey. Waxaan qabaa in xisbiyada mucaaradka ee isbaheystey aysan u caddeyn cidda ay rabaan in wada shaqeyni dhexmarto iyo sidoo kale waxay sameynayaan doorashada 2018-ka ka dib. Waxaana jirta gacan xisbiyadaas uu xisbiaga Sverigedemoqoraadi-gu u soo fidiyey iyo waliba talaabooyin cadcad oo la rabo in la gaaro ama la fuliyo balse sidaas oo tahay xisbiyadaasi ma aqbalin gacantaas furan ee loo soo fidiyey ayuu yiri Patrick Reslow.
M oo soo jeediyay in Reslow xildhibaannimada isaga dego
onsdag 17 maj kl 16.11